Pamba purogiramu yekudzidzisa uye kudya kunoshanda - Method Makia
Method Makia: Ndeipi nguva yakakwirira yekudzidzira kudzidzisa uye ketogenic kudya?
Method Makia chirongwa chekuita basa chinowanikwa muFinland, icho chava chirevo chakakurumbira munyika yadzo kwemakore mashoma. Nzira yacho inopa chirongwa chakaoma chekuita zvekuita chinogona kuitwa pamba kana mune zvekurovedza. Kuoma kwekudzidzira kunowedzera paunenge uchidzidzira - itinerary peru trip. Method Makia inosanganisirawo kudya kunosvika zviuru zvevashandi zvakave zvakakosha uye zvinovandudza kudya kwavo.
Zvokudya Nyaya Yemwe Makia
Ndave ndichiratidza hupenyu hwangu hwose, asi makore anenge 35-40 yemakore muviri wangu wakatanga kuunganidza mafuta. Iko kuchinja kwakaitika zvisingazivikanwi uye zvisingaonekwi. Mufananidzo wakaitwa nezuva rakanaka rezhizha pamahombekombe wakasvinudza meso angu.
Ndaizviyera pachedu, asi mushure mokuona mufananidzo wandakaenda kuchikero uye ndakaona kushamisika kwandaiita kuti uremu hwangu hwawedzera zvikuru. Ndakanga ndichinetseka kuti chii chingave chakaipa.
Ndaidya kupararira kwemafuta mashoma, mafuta ekugashiwa, mukaka wakawanda, zvinwiwa zvinotapira zvinonaka, mafuta ane mafuta mashoma, miriwo ine mafuta mashoma ekupfeka masaga, zvakawanda zveproteine ​​uye nyama yakashata. Mukufunga kwangu, ndakadya kudya kwakanaka, maererano nemitemo yakawanda. Chimwe chinhu chakanga chisina kunaka, chakaipa.
Ndakayera maitiro angu echolesterol, uye akanga asina kunaka. Cholesterol yakaipa yakanga yakakwirira uye yakanaka kwazvo. Mushure mekukumbira mazano, ndine mirayiridzo pamusoro pekuderedza mafuta kubva pakudya.
Ndingakwanisa sei kuderedza mafuta kubva pane zvandinodya? Mukuwedzera, munhu akandipa mazano ainyanyisa kudarika kupfuura ini. Dambudziko rakaberekwa.
Ndakabva ndashanda mubasa apo ruzivo rwomuviri wemuviri hunokosha. Ndakanga ndine dzidzo yakanaka uye ruzivo rwekutanga kuti ndigadzirise dambudziko racho. Ndakatanga kutsvaga zvakanyatsonaka muviri wemetabolism. Ndakaona apo muviri unoshandisa ma-carbohydrates uye kana uchipisa mafuta. Ndakabva ndaona nokukurumidza kuti yakakura yemakrohydrate uye yakakwirira mapuroteni kudya pasina mafuta echisikigo aizoendesa muviri muhurumende umo simba rose rinowanikwa uye mafuta aipisa zvisati zvaitika. Kana chiyero chemakoriyamu kubva kuzvokudya chiri kunyange zvishoma zvishoma uye kupisa kwemafuta hakuiti, chigumisiro ichocho kuwanda kwekuwedzera kuwanda.
Ndakaziva naDhi. Atkins diet. Icho chakakavhiringidza uye chinopesana kudya, asi pfungwa inokosha yakakwana. Nezvo, mamiriyoni evanhu vanodarika kuwanda pasi pose vakawana chiremera chakareruka. Mumuviri unotungamirirwa nekudya mune imwe nyika apo inenge yese simba rinobudiswa kubva kumafuta. Muviri uri muhupenyu hunopfuurira uchipisa, uye kurasikirwa kwekurema kunotokurumidza kupfuura nekutsanya. Izvo zvinogara zvichipisa mafuta akachengetwa pazvinovimbisa kuti kuwanda kwemafuta uye mapuroteni muzvokudya zvakakwana. Mukuwedzera, inoita kuti uve nemuviri wakakwana, uyo muviri unoita glucose.
Ndakatanga Atkins kudya, uye mitsva yacho yaishamisa. Mumwedzi mishomanana, ndakabvisa mafuta akawandisa akanga awana zvishoma. Ndakatadza mapaundi makumi matatu. Mukuwedzera, ndakabvisa ruswa pachiso changu chandakafunga kuti chakanga chiri chepamusoro pemhepo yepamusoro yandinoshandisa pabasa rangu. Panguva iyoyo, ini ndakatangawo muviri wangu wokutanga wekudzivirira muviri, uye ndakaona kushanda kwavo pakuvaka musimba mashoma.
Method Makia Got An Initial Spark
Vhidhiyo yakawana zvose zvakasungirirwa makore mashoma apfuura nezvehungwaru hweAtkins kudya nekuti pamwe chete iwe unodya bhakoni, bhotela, uye mazai. Vanhu vazhinji vakatanga "Atkins Diet" pamusana pezvikamu zviduku zvemashoko, pamwe chete nemugumisiro wekuti mabhizimisi akabuda kunze. Pasina zivo yakanaka, zvisinei, chirongwa che ketogenic hachibudiriri, uye mhinduro yacho yakaipa kana yakaipa. IAatkins kudya kune ketogenic, uye kana yakatevedzwa zvakakodzera, unodya mishonga yakawandisa, zviyero zvakaringana zveproteine ​​uye yakawandisa yemafuta akanaka.
Zvisinei, neMet Mak Makia's ketogenic diet iwe unogona kudya chero hupi zvimwe zvezvokudya zvakachena, kunze kwemashoko ega ega ehydrohydrates. Nhamba yemiriwo inogara iri hafu yeplate, saka mugove wavo unopfuvura zvakanyanya kudarika mukudya.
Mumakore akawanda ndakaedza kuedza kugadzira ketogenic kudya. Nokuda kwebasa rangu, ndakave nemukana wekuwana nguva chaiyo yezvinodiwa neropa rangu. Method Makia Reboot ndiyo shanduro yakakosha ye ketogenic weight loss program. Yakabva muitiro weAtkins, asi ine hurongwa hwakakosha hunoita kuti mafuta awedzere kushanda.
Method Makia Reboot, saka, chirongedzo chekanguva chekugadzirisa muviri. Sezvaunoswedera pachiremera chakanaka, iwe uchaenda kune yakagadzirwa Method Makia Basic Diet iyo yakakwana kumhuri yose.
Dambudziko rehurongwa hwakasiyana-siyana hwekurasikirwa kwehutano kakawanda hunosanganisira pakuti mumwe munhu mumhuri anoda kugadzirira uye kuenzanisa zvokudya zvake. Method Makia yekudya zvakakosha yakagadzirirwa kuitira kuti mhuri yose idye kudya zvakafanana. Kana imwe nhengo yemhuri ichiedza kusvika kune ketogenic, inongosiya chikamu chakasiyana chegidhyidrate. Kana zvisina kudaro, kudya kunofanana kune vose.
Makore ekupedzisira ini ndanga ndichigadzira kushandiswa kweMet Makia net. Kwemakore, ndakanga ndatevera nzira yakafanana neyoMethod Makia yekudya kwekudya, asi pakutanga kwebasa iri guru, ini ndakapa nemaune carbohydrate dzisina kufanana dzakadai semabhandi, chingwa chechiedza, mbatatisi, masukisi, uye ini ndakasiyawo kuwedzera kwemafuta. Zvisinei, kuwedzera kwangu kuwedzera kwakasimuka uye kwakasimuka kubva pa183 pounds kusvika 208. 6 pounds mugore. Chinangwa changu chaiva chekuedza chekudya chekutogenic yakapfuura. Migumisiro yemakolinehydrates ari nyore akanga akanyanya kudarika pane aitarisira, uye kudzora mari yavo yaive yakaoma. Chigumisiro chacho chaive chakasimba kwazvo kupfuura zvandakanga ndachida.
01. 01. 2015 Ndakatanga Method Makia Reboot. Mumwedzi miviri kuwanda kwangu kwakaderera kusvika 176. 4 pounds, saka shanduro yangu yemazuva ekureruka kwepurogiramu inobatsira zvikuru. Inoshamisa 32. 2 pounds mumwedzi miviri! Inonzwika zvikuru, asi panguva yekurasikirwa, handina kumbova nenzara. Muviri wangu nguva dzose wakanga uine simba rakakwana uye ndainzwa zvakanaka. Iniwo ndakaita kuti Method Makia adzore nguva dzose. Munguva yezvokudya zve ketogenic, vanhu vanogona kudzidzira zvakanaka.
Kuwana zivo kunokosha musati watanga Method Makia Reboot. Mashoko aya anonyatsotsanangura zvose zvaunoda kuti utange ketogenic inorema kurasikirwa purogiramu. The ketogenic weight loss program, kana yakashandiswa zvakanaka, yakachengeteka uye inobudirira zvikuru. Zvisinei, pasina ruzivo rwakanaka ruzivo uye kuzvipira, haufaniri kutotanga.
Uyezve, zvinonakidza kuti haufaniri kutanga ketogenic kudya kana iwe uine uremu hunokosha. Mune izvozvi, muviri wako unoshanda zvakanaka, uye iwe haudi Method Makia Reboot, asi chikafu chekudya chakakwana chakakwana kukanganisa chido chemasipi uye kuderedza kunzwa kwe nzara.
Pakupedzisira, ini ndichatsanangura mumwe wevanhu vakachenjera zvikuru nguva dzose, avo vane mazwi ave ari mazano angu mukugadzirira iyi mashoko.
"Kana iwe usingakwanise kutsanangura nyaya yacho zvakajeka, iwe hauzive zvakakwana pamusoro pazvo. "
J. A. Needlehill, nheyo yeMet Makia